Ukuthuthukiswa Komuntu Ngamunye womPedi
Njengabanye abantu abakhuluma isiBantu, umshado wePedi (lenyalo) awugcini nje ngokusemthethweni ubuhlobo phakathi kwabantu ngabanye: kungukukhathazeka kweqembu, ukubhalisa ubuhlobo phakathi kwemindeni. Empeleni, kuhilela ukudluliselwa kwezinkokhelo (magadi) ezihlotsheni zomkhwenyana ezihlotsheni zomakoti.
Ngokuphindaphindiwe, umndeni womakoti udlulisela obala umthamo womakoti endaweni yomkhwenyana (bogadi), ngakho-ke ukuzibophezela kwabo kumkhwenyana nezihlobo zakhe kugcwaliseka kuphela emva kokuzalwa kwengane. Umshado wawunesibophezelo emphakathini wendabuko wePedi. Kwakuyinkambiso yomthetho futhi ayibandakanyi imikhuba yenkolo.
Ngokungafani nemikhosi yendima ehilelekile enkambweni yokuqala, umshado awushintshi isimo somlobokazi noma umkhwenyana, kodwa esikhundleni salokho kwaphakamisa isimo sabo esikhona njengabantu abadala abaqalile ngokugcwele emphakathini wePedi. Isimo esisha esitholakalayo ngomshado sasisemthethweni, okwandisa amandla, izibopho kanye nemisebenzi yesimo esivele sitholakale.
Ukuzalwa komntwana wokuqala wePedi kwakuyisenzakalo esibaluleke kakhulu: akugcini nje ukuletha ilungu elisha endlini, kodwa futhi likhulise umama esesimweni esiphakeme esitholakalayo. Ngaphezu kwalokho, saphetha izibophezelo zomndeni womama kubaba nomndeni wakhe, kuyilapho efaka ubujamo bukababa futhi eqhubeka nomugqa wakhe.
Ukuqanjwa nokuzalwa komntwana wokuqala kwenzeka ngokujwayelekile ekhaya lomndeni kamama. Emva kokubeletha, bobabili umama nomntwana babuyela endlini kababa lapho kwakuqhutshelwa khona umkhosi, lapho umndeni womama wenza umnikelo wenyama kanye nobhiya. Lokhu kwafaka isibopho sabo sokugcina emndenini kababa ukuba banikeze ingane ngomunye wamalungu abo, lapho i-magadi, inani elibekiwe lezinkomo nemfuyo noma elilinganayo lwemali, likhokhwa.
Ekuqapheliseni isimo esisha somama, ubaba wakhela indawo ehlukile kuye, njengoba manje enelungelo lokudla nokulawula ikhaya lakhe. Lapho ebuya nomntwana, umama nengane behlangene isikhathi esithile endlini entsha. Emva kwalokhu, idili elikhethekile (i-ngwana ephuma enyangeni) ibanjwe ukugubha ukufika kwengane endlini yokhokho. Ngesikhathi sedili, kwenziwa imikhosi eyenza ukuqala komntwana emndenini kanye nomama endaweni yakhe entsha.
Emphakathini wendabuko wePedi, ukuhlukaniswa ngokobulili kwakuyisici esiyisisekelo sokuqala, kugcizelela ukungezwani okubalulekile phakathi kobulili. Ukuqaliswa ngesikhathi esifanayo kuphawulwe ukuhamba kuze kube umuntu omdala futhi kutshalwa imali ngokuqala ukuba yisakhamuzi somphakathi, futhi, uma kubesilisa, ilungelo lokuzibandakanya emisebenzini yezombangazwe nezomphakathi.
Inzuzo ebalulekile ukuthi ukuqaliswa okwenziwe ngokujwayelekile kwakuwukuqinisa i-Pedi paramount phezu kwamanye abantu ngaphakathi kombuso wabo noma inselelo yethonya: izinduna ezincane zazifanele zithole imvume kumphathi oyiPedi ngaphambi kokuba ziqale ukuqaliswa okusha. Ilungelo lokunikezela noma lokunqaba imvume likhulise igunya leNkosi yasePedi eliyinhloko, ngoba lamnika amandla ekubambeni ilungelo lokuba yisakhamuzi kanye nokubamba iqhaza kwezombangazwe kanye nezombusazwe.
Ezikhathini zamuva nje, kanye nezikhulu ezizimele ezikhululekile ekuqaliseni ilayisensi ngaphandle kokulawula okuphakathi, lo mkhosi ungumthombo wemithombo eningi kulaba baholi, abavame ukusolwa ngokusebenzisa kabi imali abaqoqa ngale ndlela. Ukuqaliswa, okwaziwa ngokuthi yi-asiya (ukusuka ekuhambeni, ukusoka) noma i-lebollo (kusuka ku-bolla, ukulimaza), kwakungenye yezikhungo ezingcwele kanye namatshe aqakathekileko endala yamaPedi. Ukuya ezikoleni zokuqala kwakuphoqelekile ukuba bonke abafana namantombazane asezingeni elifanele (okuhlukahluka kakhulu), kodwa labesilisa ababili baqaliswa ngokwahlukana. Abafana baba nemihlangano emibili; amantombazane munye.
Ngokuqaliswa bafinyelele abantu abadala futhi bahlanganiswa eqenjini elihlukile. Ukuqala kusabalulekile kumaPedi amaningi, kodwa sekube umthombo - noma mhlawumbe ukucatshangelwa - ukuhlukaniswa komphakathi. Isihluthulelo esikhulu emphakathini wePedi wesimanje, phakathi kwe-baditshaba (abaholi bendabuko) kanye nama-bakriste (amaKristu), athola ingxenye ethile ngokungafani nezinkolelo zenkolo kodwa nakubantu abakhona noma ababengekho lapho beqala khona.
Kungabuye kubonise ukungafani kwesimo somphakathi kanye nemfundo. Nakuba okuningi kokuqaliswa kwe-Pedi kuye kwasala okufanayo, kungenzeka kube nezinguquko ezithile kusukela imininingwane eqoqwe lapho i-akhawunti elandelayo isekelwe khona. Ngakho-ke kuhunyushwa esikhathini esedlule. Isikhathi sokuqala sabafana (bodika) sibafaka ebulungu eligcwele leqembu.
Owesibili (bogwera) wawuhlanganisa emphakathini wabantu, ngokwezigaba kanye nesimo emphakathini abazalelwa kuwo. UBogwera unelungelo lokuthi umuntu ahlale emlilweni futhi ahlanganyele emisebenzini yezombangazwe nezomthetho. Ngokuphambene nalokho, ukuqaliswa kwamantombazane (yale) kwavele kwabafaka ubulungu beqembu. Bavinjelwe ekuhlanganyeleni kunoma yiziphi izenzo zezombangazwe nezomthetho. Babenqatshelwe ngaphandle kwesimo sobukhulu besilisa abasithola ngeseshini sabo sokuqala sesibili.